ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): भेटियो यस्तो गो’प्य प्र’मा’ण, को जाने भयो त जे’ल ? (हेर्नुस् भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): भेटियो यस्तो गो’प्य प्र’मा’ण, को जाने भयो त जे’ल ? (हेर्नुस् भिडियो)
ललितपुर ह’त्या प्र’करण (अपडेट): भेटियो यस्तो गो’प्य प्र’मा’ण, को जाने भयो त जे’ल ? (हेर्नुस् भिडियो)
1,5172minutes read
गत सोमबार (माघ २७ गते) पूर्वसचिव कार्कीको सानेपास्थित निवासमा पत्नी मुना ग’म्भीर घा’इते अवस्थामा फे’ला परेकी थिइन्। यो ललितपुरको सानेपामा घ’टेको यो घ’टना अझै पनि रहस्यमय बनेको छ । यस घ’टनालाई लिएर धेरैको मनमा शंका उपशंका उब्जिएको र सबैको कौतोहलताको बिषय बनेको छ । यही बिषयमा आएको अपडेट अनुसार पूर्वसचिव कार्कीले ड्राईभरलाई गाडी चलाउन नदिएर आफैले गाडी चलाएर लानु आफैँमा संकास्पद भएको र शंकाको घेरो पूर्वसचिव कार्कीमाथि नै खनिएको छ।
यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर सामाजिक अभियन्ता तथा निर्देशक हरि उदासीले पनि शंकाको सुई अर्जुन कार्कीतर्फ नै मोडिएको खुलासा गरेका छन् । घ’टना अझै पनि अन्योलमा रहेको भन्दै उदासीले गाडीको बिषयले थप शंका पैदा गरेको बताएका छन् । प्राप्त सिसिटिभी फुटेज र हिजो सार्वजनिक भएको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टका अनुसार पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको डोरीले घाँटी क’सेर ह’त्या गरेको पो’स्टमार्टम रि’पोर्टबाट खुलेको छ।
घ’टनाको अ’नुसन्धानमा सं’लग्न प्रहरी अधिकृत डिएसपी सन्तोष तामाङले मुनाको मृ’त्युको कारण ‘लि’गेचर स्ट्रे’ङ्‌गुलेसन’ अर्थात् ‘डो’रीले घाँटीमा ब’लपूर्वक क’सेर सा’स फे’र्न नदिई मा’रिएको’ भन्ने रि’पोर्टमा उल्लेख गरिएको बताएका छन्। रि’पोर्टमा चौधरीको मृ’त्युको कारण भने ‘ह्या’ङ्‌गिङ’ (आफ्नै तौलले ता’नेर नि’सास्सिएर मृ’त्यु) भनी उल्लेख गरिएको छ । बाँकी कुराकानी तलको भिडियोमा :
मान्छे गाडेको ठाउँमा रातिको १२ बजे पुगी चिहान खनेका झाक्रीको अचम्मको खुलासा, आकाशमा उड्छन गड्यौला खान्छन (भिडियो सहित)
सशस्त्र प्रहरी हातहतियारसहित सेनाको हेलिकप्टरमा पुग्यो कालापानी, यसरी रक्षा गर्दैछ नेपाली भूमि
कार्टुनमा भेटिएकी नानीको न्वारन हुँदै : प्राप्तिका नाम राखियो , यीनै हुन प्राप्तिकाको जिम्मालिने महान जोडी
दुवईको अस्पतालमा उपचार हुँदैन भनेर फिर्ता गरिदिएका यि नेपालीले घरमै यस्ता जडिबुटि खाएर निको पारे कोरोना (भिडियो हेर्नुस्)
चर्चित टिकटकर सुधिर श्रेष्ठलाई आफ्नै दाई बताउने यी युवतीले ठगिन लाखौं रुपैया (भिडियो हेर्नुस्)